Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita | Grandir à Antsirabe
Ity tetik’asa fanamboara ity dia niarahana tamin’ny fikambanana SAKAFO. Io fikambanana io dia miara-miasa amin’ny fikambanana Grandir Ailleurs / Grandir à Antsirabe nanomboka ny taona 2011 tamin’ny alalan’ny fizarana sakafo maivana isan’andro ho an’ny mpianatra 1500, izay ahitana mofo sy akondro mba hazotoany mianatra.
Niitatra nakany amin’ny asa fanatsarana efitrano fianarana izany tetik’asa izany tamin’ny taona 2017, izay nahitana :
Fanamboarana ireo varavarana simba
Fanamboarana ireo dablio rehetra simba
Fanoloana ireo solaitrabe miisa 19
Fanamboarana ny valin-drihana simba
Fanamboarana ireo tafo goaka
Sakafo sy Grandir à Antsirabe dia nahazo tolo-tanana avy amin’ny mpianatra miisa 9, ny salan-taonan’izy ireo dia 19 katramin’ny 21 taona. Ny tanjon’izy ireo : Nanangona vola izay betsaka indrindra tratra mba hanamboarana ny efitranon’ny sekoly Ivory izay tafiditra ao anatin’ny tetik’asa fampandrosoana ifotony an’ny fikambanana . Ny vola azo dia nitentina 7,8 tapitrisa Ariary.
Ny asa dia nanomboka ny taom-pialan-tsasatra 2017. Ireo mpiasa sy ireo matihanina malagasy dia nampian’ireo mpianatra injeniera 9 hafa avy any amin’ny sekoly CESI Parisy sy tanora mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure izay tonga nifandimby.
Ny tanjona ? Hanatsarana ny seha-pampianarana eny amin’ny sekolim-panjakana mba ahafahan’ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana misitraka fanabeazana manara-penitra amin’ny toerana mendrika izany ary mba ahavitany ny fianarana eny amin’ny ambaratonga fototra fa tsy miasa eny amin’ny lalana.
Nanomboka tamin’ny faran’ny volana janoary 2018, ireo mpianatra 1500 sy mpampianatra ao Ivory dia afaka misitraka ireo efitra 19 izay navaozina ahafahana mianatra sy mampianatra tsara. Mendrika tokoa izany ary mankasitraka ireo rehetra nanome tanana tamin’izany !
ARAHO AN-TSARY :
Lire aussi : Fandraisan’ireo ankizin’ny fikambanana tamin’ny hetsika « Danse pour la paix »